Amanyathelo alula ama-9 okuhombisa umthi weKrisimesi kakuhle - Ukuhonjiswa Kwekrisimesi
Amanyathelo alula ama-9 okuhombisa umthi weKrisimesi kakuhle
Asinguye wonke umntu owaziyo ngokwemvelo ukuhombisa umthi weKrisimesi. Ngombulelo, kukho amanyathelo ambalwa abalulekileyo okunceda ukwenza inkqubo ibe lula. Sebenzisa la manyathelo alithoba ukuthatha umthi wakho weKrisimesi wokuhombisa ukusuka ekuqaleni ukuya kobungcali kwimizuzu.
Indlela yokuhlobisa umthi weKrisimesi Inyathelo ngenyathelo
Awudingi ukuba ubeumthi wekrisimusiiwizard ukuba ibe nomthi weKrisimesi okhangeleka kakuhle. Ukuhombisa kwakho ukugqibelela konke kuyehla kusicwangciso esincinci. Umzekelo, awufuni ukubeka izihombiso zakho phambi kwezibane zakho kuba ungagqibela ngokuxakaniseka. Ukugcina ubomi bakho kunye nokuhonjiswa komthi weKrisimesi kulula, landela la manyathelo.
I-22 Imihlobiso emihle yoMthi weKrisimesi
Iindlela ezili-17 ezinomtsalane zokuhombisa umthi weKrisimesi ngeRibhoni
Imifanekiso eli-15 yokuhombisa okungaqhelekanga kweKrisimesi
Inyathelo 1: Fluff Umthi wakho
Nokuba uthenge umthi wokwenyani okanye inkohliso, bayaxutywa xa ubazisa ekhaya okanye ubakhupha kwezona zikufutshane. Ke ngoko, thatha ixesha lokuba amasebe akho acoceke ngokugqibeleleyo. Ngomthi ongeyonyani, oku kunokuthetha ukuba ujikeleze kwaye ugobise amasebe. Kwelinye icala, umthi wokwenyani unokufuna nje ixesha elincinci lokuzinzisa emva kokuwukhupha.
ufumanisa njani ukuba umntu uqhawule umtshato
Inyathelo 2: Hlanganisa izihombiso zakho
Xa uhombisa umthi wakho weKrisimesi, kulula kakhulu ukuba yonke into iphakathi kokufikelela kweengalo. Awufuni ukugcina iilori zokuhombisa zakho ngapha nangapha, ke yiza nayo yonke into kwisithuba sakho seKrisimesi. Eli lixesha lokuba uhlele ngemihombiso yakho, ukhethe umxholo wakho, okanye ulungelelanise nje. Oku kuyakwenza konke ukuhombisa kweKrisimesi kungabi noxinzelelo.
Inyathelo 3: Khetha umxholo wakho
Umthi weKrisimesi awunawo umxholo. Kwaye ukuba awenzi njalo, zive ukhululekile ukutsiba eli nyathelo. Nangona kunjalo, ukuba ungathanda ukubanika umthi wakho weKrisimesi uzame, ke zininzi ezahlukileyoImixholo yomthi weKrisimesigaphandle phaya.
Inyathelo 4: Xhoma Izibane Zakho
Izibane zeKrisimesi zibalulekile, ke kulapho uqala khona. Okokuqala, qiniseka ukuba ucingo kwizibane zakho umbala ofanayo nomthi wakho. Umzekelo, ucingo olumhlophe lwemithi emhlophe, oluhlaza kwimithi eluhlaza, njl. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ucingo luyazimela emthini wakho. Emva koko, ukuqala ezantsi, uya kusonga ukukhanya kwakho ujikeleze umthi wakho ukuya phezulu. Zisongele kuwo onke amasebe aphambili ukuze uqiniseke ukuba ufumana nesikimu sokukhanyisa. Ungawacoca amasebe akho ngakumbi njengoko usiya ukuze ujonge ngokupheleleyo.
Zonke izibane zomthi weKrisimesi azenziwanga zilingana. Ewe, zonke zikhanyisa ngokulinganayo emthini, kodwa azibonakali ngokufanayo. Ke ngoko, kubalulekile ukwazi ezimbalwaiintlobo zezibane ezithandwayounokufumana kwimveli kunye ne-LED.
Izibane ezincinane - Ezi ziza ngobukhulu obahlukeneyo, iintlobo, kunye nemibala. Banokuqhwanyaza okanye bahambelane.
Izibane zeglobe - Ezi ziibhola ezingqukuva kwaye zibonelela ngokukhanya okuthambileyo emthini.
Izibane zebhalbhu - Izibane ezikhulu ezima kumasebe kwaye ziza zinemibala emininzi.
Kwaye awunyanzelekanga ukuba unamathele kuhlobo olunye lokukhanya nokuba. Unokusebenzisa izibane ezincinci ezimhlophe kwaye ubeke umtya wee-bulb zezibane ezinombala ukuze uzinike ipizazz encinci. Nangona kunjalo, khumbula ukuvavanya zonke izibane ngaphambi kokuzibeka emthini.
Inyathelo 5: Hlanganisa iGarland yakho
Njengezibane zakho, ufuna ukubeka igarland yakho ejikeleze umthi ngaphambi kokuba uqale ukongeza izihombiso. Ukongeza, ufuna igarland yakho ukuba ihambisane nezibane zakho kunye nomxholo opheleleyo womthi. Ke ngoko, ukuba unezibane ezininzi ezimhlophe emthini, cinga ukusebenzisa igreyland enemibala. Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa izibane ezinemibala, unokuzama isilivere okanye igolide yegolide ukuzisa izibane zakho ebomini.
Amagqabantshintshi anobuhle akhangeleka ngokugqwesileyo ukusuka kwisebe ukuya kwisebe, ngelixa iribhoni okanye i-foil garland inomdla kakhulu xa ijijeke ngokukhululekileyo ijikeleze wonke umthi. Qala ukuxhoma igaranti phezulu komthi wakho, ngokuthe ngcembe ukonyusa isixa segarland esetyenzisiweyo njengoko usebenza indlela yakho ezantsi. Songa igarland ejikeleze umthi, hayi ngokuthe nkqo.
iphi ipetroli enexabiso eliphantsi kumazwe amanyeneyo
Inyathelo 6: Beka iiBows zakho kunye neeribhoni
Uninzi lwabahlobisi bemithi bathanda ukongeza ikrisimesi encinci ngayoIirebhoni kunye nezaphetha. Ngoku lixesha lokuba ubongeze. Yima umva emthini wakho kwaye ujonge ubeko. Yongeza izaphetha kunye neeribhoni kwiindawo ezinobuchule ukunceda ukukhanya kwezibane zakho. Uya kukhulula iribhoni ejikeleze isebe ukuze ulincede lihlale endaweni.
Inyathelo 7: Khetha kwaye ubeke izihombiso zakho
Imihlobiso sisitshixo sokwenza umthi wakho weKrisimesi ubonakale. Ke ngoko, ufuna ukukhetha zonkeizivathouza kusebenzisa kuqala. Ke lixesha lokucinga malunga nokubekwa. Awufuni ukubeka yonke imihombiso yakho kwindawo enye okanye kwisebe elinye; ufuna ukubasasaza ngokulinganayo kuwo wonke umthi wakho. Ukongeza, ufuna ukucinga malunga nobungakanani besihombiso. Umzekelo, unokufuna ukusebenzisa imihombiso emincinci ukugxilisa iqabaka elikhulu lekhephu ngaphandle kwendawo.
Ingcebiso: Inye into ekufuneka uyigcine engqondweni xa useta umthi weKrisimesi kukuba akuqhelekanga ukuba umthi ubonakale wahlukile kwii-angles ezahlukeneyo. Thatha inyathelo ubuye umva ukuze ubone ukuba yonke into ijongeka njani kwaye yahluliwe. Ukuba uhlengahlengiso luyafuneka, zama ukulungisa uhlobiso olunye okanye ezimbini ngexesha. Ukuhambisa imihombiso emininzi ngaxeshanye kunokudala izikhewu ezintsha.
Inyathelo 8: Yongeza i-Tinsel kunye nezinye iiAccents
Sebenzisa i-tinsel encinci ukugcwalisa nayiphi na indawo engenanto emthini. I-Tinsel inokongeza ukubengezela emithini, kwaye nangona ingalunganga kuyo yonke imixholo yomthi, inokuba intle xa idityaniswe kwimithi ethile. Kuyimfuneko ukwenza oku njengenye yamanyathelo okugqibela ekuhombiseni. Ukuba i-tinsel yenziwe kwangaphambili, iyakukhutshwa xa izihombiso zongezwa.
wazi njani ukuba umntu luthando lwakho lokuqala
Ukongeza, ngoku lixesha lokongeza naziphi na ezinye izandi njengokukhetha komthi. Ezi ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemibala efana namajikijolo, i-poinsettias, kunye neepinecones. Ukukhethwa komthi kusebenza kakuhle ukongeza loo nto incinci kwiholide yakho.
Inyathelo 9: Beka iTopper yoMthi
YongezaIsixhobo somthi. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zabathengisi kwintengiso. Ezinye iintsapho zithanda ukusebenzisa enye ngonyaka, ngelixa ezinye zithanda ukuthenga entsha ukuhambelana nomxholo womthi. Iinkwenkwezi neengelosi zemveli kwaye zisathandwa.
Ukuhombisa umthi wakho weKrisimesi- Akukho ngxaki!
Ukuhlobisa umthi kunokudala iinkumbulo ezintle njengokujonga emva koko, ke khumbula ukonwaba ngenkqubo. Ngocwangciso oluncinci kunye noqwalaselo olucokisekileyo kwiinkcukacha, phantse nabani na angenza umthi obonakala ngathi yingcali uyihombisile. Ke ziqhayise ngomthi wakho nawo wonke umsebenzi owufakileyo ukuwuhombisa. Ngoku ukuba uyazi ukuhombisa umthi wakho weKrisimesi, lixesha lokuba uqhekeze.
Abantwana Iincwadi Imiboniso Yeslides Izinja Nokuhamba Ukulayita Amakhonkco Omtshato Isitayile Esinenwele
irhafu kumama ebhayibhileni
indlela yokufumana umbala omthubi ezinweleni
amazwi omntu olahlekelwe ngumntu amthandayo
iziseko ezinika izibonelelo kwimibutho engenzi nzuzo